DEBIAN 10: Kedu ngwugwu ndị ọzọ bara uru mgbe ị wụnye? | Site na Linux
Isiokwu a bụ n'ihu (nke abụọ) nke nkuzi raara nye DEBIAN GNU / Linux Distro, mbipute 10 (Ọkara), nke na-abụrụ ihe ndabere nke ọtụtụ ndị ọzọ dị ka MX-Linux 19 (ujo ojoo).
Akụkụ nke abụọ anyị ga-egosi nke ọzọ agbakwunye ma ọ bụ mgbakwunye (ngwa) bụ kwadoro iso optimizing (tozuru) anyị mara mma na nnukwu Distros DEBIAN 10 na MX-Linux 19.
Melite ma bulie MX-Linux 19.0 na DEBIAN 10.2 mgbe ị wụnyechara
Ebe ọ bụ na, akụkụ mbụ nke usoro nkuzi a, akpọrọ "Melite ma bulie MX-Linux 19.0 na DEBIAN 10.2 mgbe ị wụnyechara" lekwasịrị anya omume na nchịkọta dị mkpa dị mkpa maka a akpa melite, nhazi na njikarịcha nke ha, ya bụ, usoro izizi izizi emere ka arụnyere ozugbo.
N'ihota isiokwu bu ụzọ, cheta ihe na-esonụ:
"Cheta na omume na nchịkọta akwadoro ebe a ka ị gbaa ma wụnye bụ nke ahụ, "nchịkọta kwadoro", ọ dịkwa onye ọ bụla ịgba ọsọ ma wụnye ha niile ma ọ bụ ụfọdụ n’ime ha, gịnị kpatara ha dị mkpa ma ọ bụ bara uru, na obere ma ọ bụ ọkara okwu, mara na iji ha, site n'inwe ha ugbua ma ọ bụ wụnye ha.
Ma buru n'uche na omume ndị a na / ma ọ bụ nchịkọta dị nke a nwalere na Distros, ma ghara ịjụ iwepu nchịkọta arụnyere na ndabara na ndị a. Ọzọkwa, ha anaghị eme ka oriri nchekwa ma ọ bụ CPU dịkwuo elu ebe ọ bụ na, ha anaghị ebupụta usoro ma ọ bụ daemons (ọrụ) na ebe nchekwa site na ndabara. Iji mara tupu ihe ngwugwu ọ bụla ejiri, pịa ebe a."
1 DEBIAN 10: Bara uru amara nchịkọta iji wụnye
1.1 Native Games Ngwa
1.2 Nkwado vidiyo
1.3 Nkwado ọdịyo
1.4 Nkwado maka ibipụta na scanning ngwaọrụ
1.5 Nkwado maka ngwa ọrụ
1.6 Nkwado maka Windows HW na SW ndakọrịta
1.7 Nkwado maka Kọmputa HW
1.8 Nkwado maka ngwaọrụ ikuku
1.9 Nkwado maka ngwaọrụ njikọ bluetooth
1.10 Nkwado maka ngwaọrụ njikọ ịntanetị
1.11 Nkwado maka ngwaọrụ mkpanaka mkpanaka
DEBIAN 10: Bara uru amara nchịkọta iji wụnye
Native Games Ngwa
Ebumnuche: Wụnye nchịkọta egwuregwu dị iche iche site na edemede akọwapụtara
Ebumnuche: Wụnye ochie console emulators.
Ebumnuche: Wụnye ihe nkwado ọkwọ vidiyo dị nkenke, nke a na-ewukarị.
Ebumnuche: Wụnye nkwado bụ isi nke ndị ọkwọ ọdịyo, na-ejikọtakarị. Na ngwa ndị ọzọ, ngwa na ọba akwụkwọ dị mkpa maka njikwa nke ọdịyo na ụda na kọmputa.
Nkwado maka ibipụta na scanning ngwaọrụ
Ebumnuche: Wụnye nkwado bụ isi nke ndị ọkwọ ụgbọala, ngwa, tinye-ons na ọba akwụkwọ dị mkpa maka ijikwa igwe obibi akwụkwọ na ngwaọrụ nyocha.
Nkwado maka ngwa ọrụ
Ebumnuche: Wụnye nkwado bụ isi maka ngwa ụlọ ọrụ, tinye-ons na font.
Nkwado maka Windows HW na SW ndakọrịta
Ebumnuche: Wụnye nkwado ndabere maka ndakọrịta na HW na SW nke sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, ọkachasị MS Windows.
Nkwado maka Kọmputa HW
Ebumnuche: Wụnye nkwado bụ isi maka ndakọrịta na ọnyà HW nke kọmputa.
Ebumnuche: Wụnye ntọala CPU nke mbụ setịpụrụ nkwado maka ndakọrịta na ndị ọrụ Intel na AMD.
Ebumnuche: Wụnye nkwado bụ isi nke ngwaọrụ na ndị ọkwọ ụgbọala maka njikwa nke okpomọkụ, voltage nke ihe ndị dị na kọmputa ahụ, tinyere njikwa nke ndị fan.
Nkwado maka ngwaọrụ ikuku
Ebumnuche: Wụnye nkwado ngwa ngwa maka ijikwa ngwaọrụ ikuku na kọmputa.
Ebumnuche: Wụnye nkwado ọkwọ ụgbọ ala maka ijikwa ngwaọrụ ikuku (WiFi) na kọmputa.
Nkwado maka ngwaọrụ njikọ bluetooth
Ebumnuche: Wụnye nkwado ọkwọ ụgbọala bụ isi maka njikwa nke ngwaọrụ njikọ ikuku (bluetooth) nke kọmputa.
Nkwado maka ngwaọrụ njikọ ịntanetị
Ebumnuche: Wụnye ngwa ngwa na nkwado ọkwọ ụgbọala maka ijikwa ngwaọrụ njikọ USB nke jikọọ na kọmputa.
Nkwado maka ngwaọrụ mkpanaka mkpanaka
Ebumnuche: Wụnye nkwado nke ngwa na ọba akwụkwọ maka njikwa nke igwe ihe eji eme ihe na kọmputa.
Anyị na-atụ anya na esta "bara uru obere post" gbasara Gịnị mgbakwunye ngwa enwere ike itinye ya GNU / Linux Distros «DEBIAN y MX-Linux», na ụdị ya kachasị ọhụrụ na nke ugbu a maka afọ 2020, iji nweta «actualizarlas y optimizarlas», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke okike, gigantic na eto eto nke ngwa nke na maka «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » DEBIAN 10: Kedu ngwugwu ndị ọzọ bara uru mgbe ị wụnye?
Alberto Guerra dijo
Pdftk abaara m uru nke ukwuu iji mechie ọtụtụ pdf faịlụ n'otu akwụkwọ site na usoro iwu.
pdftk file_0001.pdf file_0002.pdf file_0003.pdf pusi ihe oputa file_123.pdf
Zaghachi Alberto Guerra
Daalụ Alberto. Maka onyinye gị. Enwetara m ya na Nkwado maka ngwa ngwa ọfịs nke edemede ahụ, ebe m ghọtara na etinyeghị m ngwa (nchịkọta) maka njikwa njikwa nke faịlụ PDF.
Fanye akara a: apt install pdfarranger pdfshuffler pdftk
Nke ọzọ 2 bụ maka otu mana site na eserese onye ọrụ interface (GUI).
Ekele bụ onyinye dị oke mkpa maka ọtụtụ n'ime anyị chọrọ ibido na ụwa Debian
Daalụ, Fran! Daalụ maka echiche gị ziri ezi banyere edemede ahụ.
Akwụkwọ akụkọ RubenMTL dijo
Nnọọ!. I meela nke ukwuu maka post a, ọ baara m ezigbo uru ebe ọ bụ na m gbanwere Debian 10, plasma KDE. M rụnyere ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-enweghị nsogbu. ọ bụ ezie na ugbu a, m na-akọwa nsogbu m nwere na ụfọdụ na-etinyeghị.
Site na ngwugwu alsa-firmware-loaders m nwetara:
E: Ihe ngwugwu alsa-firmware-loaders enweghị ike ịchọta
Otu ihe ahụ mere m na ngwugwu ndị a: libfaac0, amd64-microcode, firmware-atheros, firmware-b43-installer, firmware-b43legacy-installer, firmware-bnx2, firmware-bnx2x, firmware-brcm80211, firmware-intelwimax, firmware- iwlwifi, firmware-ralink, firmware-realtek, bluez-firmware.
Ekele RubenMTL! Daalụ maka okwu gị na nyocha gị. I will try to install a DEBIAN 10.3 very soon to retest each package and revalidate onye ọ bụla ugbu a ẹdude ngwugwu.
Ana m asị gị nnọọ!. Akwa !!. Daalụ maka oge gị, ekele m. !!
Mpempe akwụkwọ ọzọ wee pụta bụ ngwugwu hannah-foo2zjs:
Ngwunye hannah-foo2zjs adịghị, mana ụfọdụ ngwugwu ọzọ na-ekwu banyere ya. Nke a nwere ike ịpụta na ngwugwu ahụ na-efu, oge ochie, ma ọ bụ naanị site na isi mmalite ọzọ.
E: Nchịkọta hannah-foo2zjs enweghị nwa akwukwo maka nrụnye.
Nke a na-apụtakwa na nchịkọta: ttf-mscorefonts-installer, winetricks, playonlinux, iucode-tool
N'ikpeazụ, mgbe m chọrọ ịmaliteghachi na ọnụ, enwere m akara na m ga-agbanyụ akwụkwọ ndetu na bọtịnụ ike, n'ihi na ọ zaghị. Ma ozugbo m malitere usoro ihe omume m gbalịrị ịmalitegharị ya n'oge a site na desktọọpụ ma a na-enyocha ya ... yabụ, aghaghị m ime ya site na bọtịnụ dị na akwụkwọ ndetu. Enweghị oge m nwere ike ịmalitegharị ma ọ bụ mechie site na desktọọpụ, m ga-eme ya ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ịpị bọtịnụ ahụ.
Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka idozi nsogbu ndị a, ekele maka oge gị, ekele!
Ekele RubenMTL! Enweghị m ike ịgwa gị kpọmkwem. Ọ nwere ihe gbanwere metụtara njikwa ike (ACPI). 🙁
Enweghị ihe nkiri, na-ekele agbanyeghị maka enyemaka! Cheers !!
Ngwungwu maka nkwado mmepe Sọftụwia na DEBIAN 10